I-Springbok Casino yaku inthanethi | Ibhonasi engu-R300 yamahhala engenayo idiphozi
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-springbok casino
Ibhonasi Lokukwamukela:R350 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
R11, 500 Ibhonasi Lokukwamukela
Abalandeli bama khasino abafuna okuthile okuhlukile kwase Ningizimu Afrika kuphela abadingi ukubheka ngaphandle kwe-Springbok Khasino. Ukusuka kwiphawu kuphela – okubonisa inyamazane ye-Impala yomibala ehlaza neye golide igxuma emoyeni ngokuziqhenya — ungasho ukuthi iyikhasino eziqhenya kakhulu ngokuthi ibese Ningizimu Afrika
Ekubeni i khasino yaku-intanethi yase Ningizimu Afrika akuyona ukuphela kwento eyenza iSpringbok khasino ifaneleke ukuthi uyizame. Ngokuya lapho amakhasino aku-intanethi esiya khona, futhi kuyipulatifomu eqinile. Ngobubanzi obukhulu bemidlalo evela kwabanye abathuthukisi abahamba phambili kuleli bhizinisi, Springbok Khasino inokunikela okuningi. Faka kulokhu ibhonasi yokuyamukelwa ephanayo ngomusa, ukwesekwa kwamakhasimende nobanzi wamaphromoshini amanye, Springbok Khasino kuyinto elula ukuyikhetha kubo bonke abalandeli bekhasino abasha nabadala.
Amakhodi Wamabhonasi Akwamukelwa Ku-Springbok Khasino
Enye yezinto ezinhle kakhulu zokubhalisela ipulatifomu entsha ngumabhonasi okwamukelwa ongawasebenzisa. Noma zingahle zibonakale zingabalulekanga, zingakufanelekela imali eningi uma udlala amakhadi wakho kahle. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukunaka ngokucophelela amabhonasi akwamukelwa lawo nguphanwa ngawo. kukhokonke, leli bhonasi lokwamukelwa, elihlinzekwa ngabakwa-Springbok Khasino kubadlali abasha libiza isamba esiyi zinkulungwane eziyishumi nanye namakhulu amahlanu, (R11500.00) okuzoqongelwa kumadiphozithi amathathu owabekele ekuqaleni.
Ngemuva kokubhalisa, idiphozithi yakho yokuqala izofaniswa nge-100% epulatifomu, ngemali efinyelela ku- inkulungwane namakhulu amahlanu Ukuyicelela, bhekisa engxenyeni yebhonasi yewebhusayithi futhi usebenzise ikhodi ethi ‘SPRINGBOK100’.
Ibhonasi yeDiphozithi yesibili
Ngemuva kokuba idiphozithi yakho yokuqala idlule, idiphozithi lakho elilandelayo kupulatifomu, lizokunikeza ibhonasi yomdlalo engu-50% yediphozithi yakho efinyelela kwi-zinkulungwane ezinhlanu (5000) Sebenzisa ikhodi yebhonasi ethi ‘SPRINGBOK50’ ukuyicelela bese izosetshenziswa ku-akhawunti yakho.
Ibhonasi yeDiphozithi Yobuthathu
Eyokugcina idiphozithi eyokwamukelwa kuzokunikeza ibhonasi yomdlalo engu-50% yediphozithi yakho efinyenyela ku-R5000. Sebenzisa ikhodi ethi ‘SPRINGBOK50’ ukuyisebenzisa ku-akhawunti yakho.
Izinga lokuqala: 100% kufinyelela kwi-nkulungwane namakhulu amahlahu (1500) sebenzisa ikhodi ethi ‘SPRINGBOK100’
Izinga lesibili: 50% kufinyelela kwi- nkulungwane ezinhlanu (5000)sebenzisa ikhodi ethi ‘SPRINGBOK50’
Izinga lesibili: 50% kufinyelela kwi nkulungwane ezinhlanu sebenzisa ikhodi ethi ‘SPRINGBOK50’
Amakhodi Wamabhonasi Wase-Springbok Khasino Ngaphandle Kwadiphozithi
Ukuvumela abadlali ukuthi bazame ipulatifomu, Springbok Khasino inikeza ibhonasi ngaphandle kwediphozithi. Ukukukhuthaza ukuba ubhalise, Springbok Khasino inikezela abasebenzisi abasha ibhonasi ka-R300, mahhala ngokuphelele, ngaphandle kwemfanelo ukusebenzisa kuwebhusayithi. Ungasebenzisa lokhu ukuzama imidlalo ehlukahlukene nama-jackpots ikhasino iphana ngawo . Ukuze ucelele ibhonasi yengaphandle kwadiphozithi, sebenzisa ikhodi yekhuphoni ethi ‘DLALA NGE 300’.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikelwa Ngu-Springbok Khasino
Ukuze uhlale unentshisakelo kupulatifomu, Springbok Khasino nayo inezinhlelo eziningi zamaphromoshini ezingenamkhawulo namabhonasi asendaweni okugcina ukuthi ubuye. Lezi zingasetshenziswa ngemuva kokuthi amabhonasi akho akwamukelwa aphelelwe yisikhathi, ngakho-ke indlela enhle yokuthola imali eyengeziwe.
300% Bhonasi: Sebenzisa ikhodi yekhuphoni ethi 'SPRINGBOK300' ukuthola ibhonasi yomdlalo engu-300% yokulinganisa imali yakho - kunoma iyiphi idiphozithi eyenziwe epulatifomu. Iya esigabeni se-cashier bese uhlenga le khodi ukuze usebenzise umnikelo.
25% Imali emuva: Uma uthintana nokwesekwa kwamakhasimende, ungacela ibhonasi yokubuyisa imali emuva engu-25% ngesidingo sokudlala se-x10 kufaka umkhawulo wokukhokha ongaphezulu. Ayikho ikhodi yesaphulelo edingekayo.
100% Ibhonasi ye-Lucky 7: Kubadlali abangama-amashumi ayisikhombisa nesikhombisa (77)bokuqala abayicelelayo lokho, bangathola ibhonasi eyimali yokubuyela emuva engu-100% ifike emakhulwini ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nesikhombisa
i-Comp Namaphuzu Wokwethembeka: Springbok Khasino inohlelo lwamaphuzu athembekile alungele ngokuphelele, olukuvumela ukuthi uqongelele amaphuzu wamabhonasi kupulatifomu. Lokhu kungathengiselwa ukusebenziswa njengekhredithi yekhasino, ekuvumela ukuthi uthole imali ethe xaxa.
Springbok Casino salutes talented South Africans that have become known through viral videos in social media and from performances on talent shows like South Africa’s Got Talent, X Factor, Idols South Africa and The Voice South Africa.
Use the coupon code SATALENTS and get 25 free spins on the popular Fortunate Buddha slot game! The promotion is active until the end of June.
Izinhlobonhlobo Ezinhle zama-Slot
Ngaphandle kokudlala imishini yama-slot esheshayo, zama enye yemidlalo eningi yetafuleni leyo Springbok Khasino iphana ngayo. Noma ngabe ukhetha Blackjack, baccarat, poker, noma pontoon, kunokuthile okufanela zonke izintandokazi.
Eminye Imidlalo Enikelwe
Uma ufuna ushintsho kusuka emidlalweni ejwayelekile yasekhasino, kungani ungazami eminye yemidlalo eminingi enikelwayo. Lokhu kufaka imidlalo efana neCraps, Treasure Tree, Keno neBanana Jones.
Izindlela Zokuhoxisa Ezamukelekile E-Springbok Casino
EasyEFT Yebo X
Bitcoin Yebo 48-72 amahora
Wire Transfer Yebo kufinyelela 20 amasuku
Secure Instant Deposit Yebo 48-72 amahora
Izindlela Zokudiphozitha Ezamukelekile E-Springbok Casino